दलितले छोएको खानु हुँदैन भन्ने मान्यता तोड्न खोज्दा आफैं गाउँबाट निकालिए एक परिवार - Koshi Online
दलितले छोएको खानु हुँदैन भन्ने मान्यता तोड्न खोज्दा आफैं गाउँबाट निकालिए एक परिवार
जेठ १३, बाजुरा, बाजुराको दुर्गममा रहेको हिमाली गाउँपालिका–२ मा बसोबास गर्दै आएका जयलाल बुढाका दम्पतीले दलितको हातको पानी खाएको भन्दै गाउँलेले पीडा दिने गरेकाले सो पीडा सहन नसकी गाउँ छाडेका छन् ।
वर्षोदेखि गाउँमै बसोबास गर्दै आएका भएपनि केही वर्षदेखि भने ती दम्पतीले नातीखोला गाउँ छोड्न बाध्य भएका छन् । हिमाली गाउँपालिका–२ नातिखोलामा बस्ने ६० वर्षीय जयलाल बुढाको परिवारलाई दलितको हातको पानी खाएको निहुँमा गाउँबाट लखेटिएको बताइएको छ । स्थानीयवासीले बुढाका दम्पतीलाई हरेक सामाजिक क्रियाकलापमा अलग्याएर गाउँमा बस्न नदिएको बुढाले गुनासो गरे।
सामाजिक परम्पराअनुसार दलितले छोएकाले कुनै चीज वस्तु खानु हुदैन भन्ने मान्यतालाई तोड्नका लागि एक दलितको हातको पानी खाँदा आफ्नो दम्पती र नातिनातिनीसमेत गाउँबाट लखेटिएको बुढाले बताए । दलितसँग सम्बन्ध राखेको भन्दै गाउँलेले कुटपिट गरी सामाजिक रुपमा अलग्याएको दम्पतीले बताएका छन् । गाउँलेबाट लेखेटिएपछि बुढा दम्पती जंगलको नजिकै एक सानो छाप्रो बनाएर बस्दै आएका छन् ।
आफूहरुलाई आफ्ना छोराले भेटेमा समेत उनीहरुलाई गाउँलेले कुटपिट गर्ने गरेको बुढाले बताए । गाउँमा गएका थाहा पाएमा गाउँलेले धम्की दिँदै गाउँमा नआऊ भन्दै लखेट्ने गरेका छन् । बुढाका दम्पतीले नातिनातिनीलाई आफैँसँग राखेर निजी विद्यालयमा पढाउने गरेका छन् । हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर मल्लले दम्पतीका परिवारलाई दुःख दिनेलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अहिलेको युगमा पनि कुसंस्कार गर्ने जो कोहीलाई छुट नभएकाले यसका बारेमा यथार्थ बुझेर कारबाही गर्ने मल्लको भनाइ छ ।
तपाईंलाई थाहा छ ? नेलपोलिस लगाउँदा क्यान्सर पनि हुनसक्छ
नौ वर्षीया छात्रालाई एकान्तमा लगेर अश्लिल फिल्म देखाउने शिक्षक प्रहरी फन्दामा
धूम्रपान त्याग्न सक्नु भएन ? त्यसोभए यसो गर्नुहोस्
‘साइबर क्राइम’ युवावर्गको संख्या बढी
सप्तरीमा कुटपिट गरी गर्भपतन गराउने ६ जना तीन महिना जेल सजाय
अनौठौं चलन, जहाँ सिस्नु हानाहान गरी मनाइन्छ माघेसंक्रान्ति !